ပိုးသတ်ဆေး Handlers တွေကို, မှုတ်, ထိုအပလီကေးရှင်း, အသီးအရွက်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty Template ကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ပိုးသတ်ဆေး Handlers တွေကို, မှုတ်, ထိုအပလီကေးရှင်း, အသီးအရွက်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized2မှတ်ချက်များ 526 views
ပိုးသတ်ဆေး fungicides ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်သည်, ချုံပေါ်သို့မဟုတ်ပိုးသတ်ဆေး, ချုံ, မြက်, မြေဆီလွှာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမှတဆင့်သို့မဟုတ်ရုက္ခဗေဒအသီးအရွက်များ, ဖုန်မှုန့်, အငွေ့, တွန်းလှန်, သို့မဟုတ်ဓါတုဗေဒလျှောက်လွှာ. ယေဘုယျအားဖြင့်အချို့ညွှန်ကြားချက်များနှင့် Express သို့မဟုတ်အမျိုးသားအရည်အချင်းများတောင်းဆိုနေပြီ.
ဝန်မှုတ်ရေကိုအသုံးပြုပြီးတင့်ကားများနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများ, ဖြည့်စွက် accordingto.
တောအုပ်မှလျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်းအရောအနှောပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ် fungicides, ချုံ, ကိုက်, သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်အသီးအရွက်များ.
ပိုးသတ်ဆေးသုံးပြီးသတ်မှတ်ထားသောနက်နဲသောပင်လယ်မှဒေသများကာကွယ်ပါ, မျက်ရည်စက်လေးတွေဖြစ်ကြောင်းအသိပညာတိုင်းတာအကောင်အထည်ဖော်ရန်, ရာသီဥတုအခြေအနေများ၏, အဆင့်မှ- အရှည်အချိုးအစား, နှင့်များ၏စွက်ဖက်မှု.
သယ်ဆောင်သည်, မောင်း, နှင့် nozzle ရွှေ့, ရေပိုက်, နှင့်ခိုင်ခံ့သောရေမှုန်ရေမွှားမှတောင့ designated ဖြစ်ကြောင်းသောအရပ်တို့ကိုမကျော်.
မော်တာ Start နဲ့စက်တွေပါဝင်ဆောင်ရွက်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်မှုတ်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ပို့ပေးသို့မဟုတ်ခရီးဆောင် Aerosol ထုတ်ကုန်များအတွက်အဖြစ်.
ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများ accordingto ရွေးချယ်ထားသည့် Link ကိုရေပိုက်နှင့် nozzle, ဖြန့်ဖြူးနမူနာလိုအပ်ချက်များကို, ရှုခင်း, နှင့်အလျင်.
functioning ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုသေချာစေရန်ကင်းစင်သို့မဟုတ်ထောက်ခံမှု devices များ, အလုပ်သမားရေ, ဓါတ်ဆီ, lube, သို့မဟုတ်လက် tools များ.
အလုပ်-related စာရွက်စာတမ်းအတွက်နားလညျမှု-နားလညျမှုရေးစပ်စာကြောင်းများနှင့်အပိုဒ် Reading.
အခြားအ-ကလူတစျခုလုံးကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတင်ပြအခိုင်အမာအဘယ်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်,, ဖန်ဆင်းခံရသည့်အချက်များနားမလည်ဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ယူပြီး, သင့်လျော်သောအဖြစ်တောင်းခံကိစ္စများ, နှင့်မလျော်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing ဘယ်တော့မှ.
ထိထိရောက်ရောက် data တွေကိုဖော်ပြအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်-စကားပြောဆိုနေခြင်း.
သင်ယူခြင်းသို့ချဉ်း ကပ်. -လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ထိုပြဿနာသင်ကြားရေးများအတွက်သင့်လျော်သော instructionPERtutorial အလေ့အကျင့်များနှင့်ကုသကောက်နေသို့မဟုတ်အသစ်အချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စောင့်ကြည့်-စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး / တွေ့ရှိထိရောက်မှု, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုရှေးရှေး, သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖန်တီးသို့မဟုတ်မှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ.
လူမှု othersA တုံ့ပြန်မှုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့လုပ်ပေးနေချိန်မှာသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့ သိ..
othersI လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. Dexter-ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ရပ်များ.
တစ်ဦး layout ကိုဖန်တီးရန်စစ်ဆင်ရေးအကဲဖြတ်-ဆန်းစစ်ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကို.
စားသုံးသူများကိုနည်းပညာဒီဇိုင်း-Making သို့မဟုတ် align လုပ်ဖို့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ပါတယ်.
Tools များရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ကြင်နာတဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခဲ့.
အရစ်ကျ-Installing ကိရိယာများ, မော်ဒယ်များ, cabling, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. encoding-ထုတ်လုပ်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-လေ့လာခြင်းသည်အခြားနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုစစ်ဆင်ရေး, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သို့မဟုတ် gauge ကိရိယာသင့်လျော်စွာဖျော်ဖြေနေသည်သေချာစေရန်.
ပြုပြင်တာတွေ-Restoring မရှိမဖြစ်သော tools တွေကိုအသုံးချဖို့နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-Completing စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ကုန်စည်၏စစ်ဆေးခြင်း, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုမှန်းရန်.
analysis-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဘယ်လောက်နှင့် setting ကိုအတွက်လမ်းတိုးတက်မှု, စစ်ဆင်ရေး, ဝေဒနာတွေနှင့်အတူအကျိုးခံစားခွင့်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ.
နည်းလမ်းများစနစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ညာဘက်သို့မဟုတ် performance ကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအကဲဖြတ်-ဖော်ထုတ်ခြင်းအစီအမံသို့မဟုတ်ညွှန်းကိန်း, စက်၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ.
ဒေါ်လာပြီးစီးခဲ့ task ကိုရရှိရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုချွေတာသုံးစွဲ-ဆုံးဖြတ်၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဤကုန်ကျစရိတ်များအတွက်စာရင်းကိုင်.
ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်မှုများ-ရှာဖွေခြင်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ကိရိယာများကိုသင့်လျော်သောသုံးကြည့်ရှု, အင်္ဂါရပ်များ, နှင့်မရွေးဘူးမှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ operate.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-အားပေးမှုအုပ်ချုပ်ရေး, အဆောက်အဦး, သူတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖြစ်လူတွေ directing, သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များဖော်ထုတ်.
ဇွဲ – 88.39%
အကွောငျးရငျး – 89.19%
ထိန်းချုပ်ရေး – 85.54%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 87.89%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 88.97%
ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 83.42%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.50%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 86.70%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 93.27%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 90.00%
သမာဓိရှိခွငျး – 89.47%
လွတ်လပ်ရေး – 91.55%
သစ်လွင်မှု – 88.55%
analytical အတွေးအခေါ် – 88.38%
Pingback: Job Interview - Ten Commandments Certainly Follow - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Nasj, BoomBoom)
Pingback: Mompreneur? How You Can Juggle Your Enterprise And Your Own - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Nasj, BoomBoom)